I-Raw Cetilistat powder (282526-98-1) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
I-Cetilistat powder iyinhlangano ye-inhibitor inoveli ye-pancreatic lipase eyenziwa yi-Alizyme yokwelapha ukukhuluphala nokuhambisana nokuziphatha okuhlobene ...
Umthamo: 1410kg / inyanga
I-Raw Cetilistat powder (282526-98-1) Incazelo
I-Raw Cetilistat powder iyinhlangano ye-pancreatic lipase inhibitor eyenziwa ngu-Alizyme yokwelapha ukukhuluphala nesifo sikashukela nezinye izifo. Isebenza ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emanzini. Ivimbela amafutha (triglycerides) ekudleni okungaxhunywanga futhi aguqulwe abe amafutha e-acids mahhala angabanjwa ngumzimba. I-Raw Cetilistat powder yanciphisa kakhulu isisindo futhi yabekezelela kangcono kune-orlistat.
I-Raw Cetilistat powder (282526-98-1) Imininingwane
Igama Product I-Raw Cetilistat powder
Igama leKhemikhali I-Raw Cetilistat powder (i-Alt-962); i-Xinliorlistat; i-Raw Cetilistat powder (282526-98-1)
Brand NAme Ikhamera noma i-Oblean
I-Drug Class Imithi yokuphuza ngokweqile
CAS Inombolo 282526-98-1
I-molecular Fi-ormula C25H39NO3
I-molecular Weziyisishiyagalombili 401.58
IMisa ye-Monoisotopic I-401.293 g / mol
Ukuxuba Pi-oint 72.0 kuya ku-76.0 ° C
Fukuvuselela kabusha Pi-oint 74 ° C
Color I-Crystal engenawo omhlophe
Sukufaneleka I-Soluble ku-DMSO, hhayi emanzini
Aukuphikisana Sebenzisa ukuphatha ukukhuluphala ngokweqile ngezinkinga
I-Cetilistat, eyaziwa nangokuthi i-ATL-962, i-inhibitor inoveli ye-pancreatic lipase eyenziwa yi-Alizyme yokwelapha ukukhuluphala nokuhlanganiswa kokufiphala, kuhlanganise nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela. Yenza ngendlela efanayo ne-orlistat yama-oldlist (i-Xenical) ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini. Ngaphandle kwalokhu ku-enzyme, i-triglycerides kusukela ekudleni ivinjelwe ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids futhi ixhunyiwe ngaphandle kwe-nongested. Lo muthi kufanele uthathwe kanye nokudla okune-fat fat okunempilo kanye nenani eligcwele lokuzivocavoca ukuze kuzuze imiphumela emihle kakhulu.
Ezilingo zabantu, i-cetilistat powder yaboniswa ukukhiqiza ukulahlekelwa kwesisindo esifanayo noma i-orlistat, kodwa futhi yakhiqiza nemiphumela emibi efana ne-oily, izihlalo ezixekethile, ukungahambi kahle kwe-fecal, ukunyakaza kwesibindi, kanye ne-flatulence. Kungenzeka ukuthi izinyathelo ezifanayo zokuqapha zingasetshenziswa lapho ukutholakala kwamavithamini amaningi anamafutha kanye nezinye izakhi ezinomsoco ezinomsoco kungavinjelwa, okudinga ukuthi izithasiselo zevithamini zisetshenziselwe ukugwema ukungaphumeleli.
I-Cetilistat powedr yamukelwa yi-Pharmaceuticals Medical Devices Agency yaseJapane (PMDA) ngoSeptemba 20, i-2013. Yakhiwa nguNorgine noTateda, bese bethengiswa njenge-Oblean® nguTatha eJapane.
I-Cetilistat powder iyi-powder yokulahlekelwa isisindo esetshenziswa ngokuhambisana nokudla okuphansi kwekhalori. I-Cetilistat iyinzalo ye-lipase inhibitor yomzimba, isebenza ngokuvimbela inani elikhulu lamanoni ngokugaya futhi lixhunyiwe emzimbeni. Leli poda yokulahlekelwa isisindo ihlukaniswa njenge-lipase inhibitor futhi isebenza ngokuqondile ohlelweni lokugaya lapho livimbela isenzo se-lipolytic enzyme okuthiwa i-lipase. Lezi lipases yilokho umzimba owusebenzisa ukugaya amanoni. Kodwa-ke, uma lo muthi uphathwa eceleni kwesidlo, ubophezela ku-lipases, ngaleyo ndlela ubavimbela ekuphuleni amanoni. Amafutha angenawo ama-hydrolyzed esikhundleni salokhu ahlanjululwa emanzini, okwenza kube nokwanda kwamafutha e-fecal nokunciphisa amafutha. Uma isetshenziselwa ukudla okunciphisa ikhalori, ingasiza ukuthuthukisa ukulahlekelwa kwesisindo futhi kwenze kube lula ngeziguli ezingaphezu kokukhululeka ukubuyela emuva, ngaleyo ndlela kukhulise amathuba okulahleka kwesisindo. Indlela yokusebenzisa ifana ne-orlistat yakudala ye-powder ngokuvimbela i-lipase ye-pancreatic.
Izinzuzo we-Cetilistat powder (282526-98-1)
▪ Ukwelashwa kokukhuluphala
▪ Ukunciphisa isisindo somzimba
▪ Ukwelashwa kwesifo sikashukela
▪ Ukubekezelela kahle uma kuqhathaniswa nezinye izidakamizwa
I-Cetilistat powder enconyiwe (282526-98-1) Isilinganiso
I-Cetilistat powder iyatholakala njengethebulethi yokusetshenziswa komlomo, equkethe i-120 mg ye-Cetilistat yamahhala. Umthamo ophakanyisiwe ngu-120 mg kathathu ngosuku ngemva kokudla ngakunye. Umuthi uthathwa ngokudla ukuqinisekisa ukuthi ungasebenza ngenkathi ukudla kugawulwa, ukuze ukunwa kwamanoni ekudleni kungancishiswe ngempumelelo.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo we-Cetilistat powder (282526-98-1)
Iziguli ezithatha ukwelashwa kokukhuluphala nge-Cetilistat powder zingabhekana nemiphumela emibi. Kumele utshele udokotela wakho uma lokhu kwenzeka. Kuneminye imiphumela emibi yokubhekisela:
▲ Amafutha esitokisini
▲ I-cramp esiswini
▲ Flatus ngokukhipha
▲ Ukungahambisani nomzimba
▲ Izithambile ezithambile
▲ Ukungqubuzana kwe-nasal
▲ Ukuhlukunyezwa njalo
▲ Ubuhlungu esiswini
▲ Ukudabuka noma ukuhlanza
▲ Ukuphelelwa amandla
▲ Ukushaya kwenhliziyo okungavamile
▲ Ukukhathala okungavamile noma ubuthakathaka